Ukuhambelana kothando lweGemini - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kothando lweGemini
Ukuhambelana kothando lweGemini
Abathandi beGemini bathathelwa ingqalelo ukuba bahambelana kakhulu neSagittarius kwaye ubuncinci buhambelana neTaurus. Ukuba luphawu lomoya oluhambelana nomqondiso we-zodiac kukwaphenjelelwa bubudlelwane phakathi kwezinto ezine zodiac: Umlilo, uMhlaba, umoya kunye naManzi.
watshata nendoda yanamhlanje
Abo bazalelwe eGemini babonisa izinto ezithile ezahlukeneyo xa benxibelelana nolunye uphawu lweshumi elinanye lweempawu zodiac kunye nabo. Nganye yezi zinto zidibeneyo zidibeneyo kufanelekile ukuba zixoxwe ngokwahlukeneyo.
Kwisicatshulwa esilandelayo siza kuchaza ngokufutshane konke okuhambelana phakathi kweGemini kunye neminye imiqondiso yeenkwenkwezi.
Ukuhambelana kweGemini kunye neeAries
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo olula! Isithembiso sovuyo olukhulu kunye nokuzonwabisa njengoko nobabini ninikwe ubomi.
I-Gemini iguqulela ngokulula kwiimfuno zomlilo o-Aries, ngelixa ii-Aries zikonwabela ukuphefumla komoya omtsha. Nangona kunjalo naka ingqalelo ukuba uhambo lobomi alwenzelwanga ziziphazamiso kunye nokuzonwabisa kunye nozinzo ayisiyiyoyona nto iphambili kuni nobabini.
Ukuhambelana kweGemini kunye neTaurus
I-Pragmatic and esengqiqweni I-Taurus ifuna ukulawula kunye nokuyalela ukuba ubudlelwane babo buhamba njani ngelixa i-Gemini eguqukayo kwaye inamandla ayizimiselanga ukuthobela kwaye ikhetha ukuhlala kwimimandla ephuphayo.
11/22 uphawu lweenkwenkwezi
Ukuhambelana kweGemini kunye neGemini
Le miqondiso mibini yomoya ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Unokuqonda izimvo zomnye nomnye kunye nenkululeko yesidingo ngaloo ndlela kukhokelela ekubeni ixesha lihlale linanditshwa kunye okanye ukhulule umoya wokhuphiswano osisigxina kubudlelwane bakho.
Unxibelelwano oluhlengahlengisayo uneengqondo ezingazinzanga, kwaye oku kunokukuthintela ekunxibelelaneni nabanye kwinqanaba lentliziyo.
Ukuhambelana kweGemini kunye neCancer
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo ongaqhelekanga! Akukho namnye kuni oqondayo ukuba kutheni umtsalane komnye. Izinto zakho zonke zibonakala ngathi zihamba ngendlela eyahlukileyo.
Umhlaza ufuna uzinzo kwaye isimangaliso iGemini ngokuqinisekileyo ayinguye umntu wokubonelela ngentuthuzelo kunye nokuthembeka. Iphupha iGemini liziqhelanisa ngokulula ngelixa iCancer igcina indlela yayo ngaphandle kokucinga ngokujonga ezinye iindlela.
Ukuhambelana kweGemini kunye noLeo
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo olula! Isithembiso sovuyo olukhulu kunye nokuzonwabisa njengoko nobabini ninikwe ubomi. IGemini iyaziqhelanisa ngokulula neemfuno zomlilo ovuthayo, ngelixa uLeo ekonwabela ukuphefumla komoya omtsha onikezwe ngu.
Nangona kunjalo naka ingqalelo ukuba uhambo lobomi alwenzelwanga ziziphazamiso kunye nokuzonwabisa kunye nozinzo ayisiyiyoyona nto iphambili kuni nobabini.
Ukuhambelana kweGemini kunye neVirgo
Lo mqondiso womoya kwaye lo mqondiso womhlaba ngumdlalo ongenakwenzeka! Ngokwendalo bayatsala kwaye bayaphelelisana njengeethoni ezinobuchule zeVirgo iGemini enamandla kodwa ngamanye amaxesha izinto ziyaqhuma kwaye akukho nto umntu anokuyenza.
Enye i-Virgo ezolileyo ayiyi kuyiqonda ngokupheleleyo iGemini enamandla kunye nezinto eziphathekayo. Iinjongo zabo zahlukene kakhulu kangangokuba kunzima kubo ukuba bafumane indawo efanayo xa kufikwa kwizicwangciso zexesha elizayo.
Le miqondiso mibini yomoya ngumdlalo owomeleleyo! Uyaziqonda izimvo zomnye nomnye kunye nenkululeko yesidingo ngaloo ndlela kukhokelela ekubeni ixesha lijongwe ngokubanzi kwinkampani yomnye nomnye.
Indoda ye-scorpio inomdla kumfazi we-gemini
Nobabini ningabanxibelelanisi abalungileyo abaneengqondo ezingazinzanga into eya kukuzisela izibonelelo ezininzi ngexesha lobudlelwane bakho.
Ukuhambelana kweGemini kunye neScorpio
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo ongaqhelekanga! Ngokumangalisayo iGemini ibonakala ngathi iyaziqonda iiScorpios isidingo sedrama kunye nothando.
Nangona kunjalo iScorpio inenkani kwaye ngokuqinisekileyo iyakufika kwimithambo-luvo yeyona nto izolileyo kwaye iqondayo iGemini.
Ngokuzijonga nje kubonakala zilungile kodwa ekuhambeni kwexesha kunye nokudakumba kunokuvela xa kushiywe kungaphikiswa.
Ukuhambelana kweGemini kunye neSagittarius
I-Gemini iyaziguqula ngokulula kwiimfuno zeSagittarius yomlilo, ngelixa lokugqibela lonwabela ukuphefumla komoya omtsha obonelelwe.
Ukuhambelana kweGemini kunye neCapricorn
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lomhlaba ngumdlalo olula! Ngokwendalo bayatsala kwaye bayancedisana njengeetoni ezinobuchule beCapricorn iGemini enamandla.
Phantsi eMhlabeni uCapricorn ngamanye amaxesha uziva isidingo sokuyalela ukuba ubudlelwane babo buhamba njani ngelixa iGemini eguqukayo kwaye inamandla ayizimiselanga ukuthobela kwaye ikhetha ukuhlala kwimimandla ephuphayo kodwa ngandlela thile izinto ziyabasebenzela aba babini.
Le miqondiso mibini yomoya ngumdlalo owomeleleyo! Niyaziqonda izimvo zomnye nomnye kunye nenkululeko edinga oko ekhokelela ekubeni ixesha lijongwe ngokubanzi kwinkampani yomnye nomnye.
Ukuhambelana kweGemini kunye nePisces
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo ongenakwenzeka! Akukho namnye kuni oqondayo ukuba kutheni umtsalane komnye kodwa ukhona. Mhlawumbi bobabini baziva isidingo sokubenza nzima ubomi babo ngokungeyomfuneko.
Nangona kunjalo iiPisces zinenkani kwaye ngokuqinisekileyo ziya kufikelela kwimithambo-luvo yeyona nto izolileyo kwaye iqondayo iGemini. Ngokuzijonga nje kubonakala zilungile kodwa ekuhambeni kwexesha kunye nokudakumba kunokuvela xa kushiywe kungaphikiswa.
Indlu ye-12 kwi-Astrology: Zonke iintsingiselo kunye nefuthe
I-Taurus Sun Umhlaza weNyanga: Ubuntu obumnene
yintoni i-zodiac ngumatshi wama-30
I-gemini yindoda kunye negemini yomfazi
intombi yindoda gemini ubudlelwane bomfazi
scorpio ubufazi virgo ubudlelwane bobudoda
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJuni 22